Isango lakho lokuya eNtabeni i-Adventure
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguJosh
Ukuhamba nje iiyure ezi-2 ukusuka eDenver, ikhabhathi yethu ikuvumela ukuba ubalekele ukubaleka ngempelaveki okanye iholide yosapho olongezelelekileyo. Ibekwe phakathi kweedolophu zembali zangaphandle zaseBuena Vista kunye neLeadville, kwaye emthunzini weyona ndawo iphakamileyo yeColorado, ilali yaseTwin Lakes yindawo enqabileyo engafunyaniswanga, enikezela ngeyona mbono ilungileyo kwilizwe kunye nokufikelela kwangoko entlango ngaphandle komnyango.
Eli likhaya lethu losapho esiliqeshileyo xa singalisebenzisi ukuvumela abanye ithuba lokufumana ubuhle bendalo bendawo yaseTwin Lakes. Siyazamkela iindwendwe eziyihloniphayo le nyani kwaye siyanicela ukuba niyiphathe indlwana ngathi yeyakho.
Abakhenkethi basehlotyeni bayakonwabela ukufikelela kwiikhilomitha zokuhamba kunye neendlela zokuhamba ngebhayisekile (kubandakanya ukufikelela ngokulula kwindlela esezantsi ukuya kwincopho yeMt. Elbert), ukuloba echibini eTwin Lakes okanye kwiMt. Elbert Forebay, ukubhabha ukuloba i-100+ yeemayile zeMbasa yeGolide. amanzi e-trout kuMlambo wase-Arkansas, i-whitewater rafting, okanye ukuthatha i-scenic drive ukuya e-Aspen ngaphezu kwe-Independence Pass. I-patio yethu ye-40-foot inikeza iimbono ezimangalisayo zamachibi, i-Mt. Hope kunye ne-Mt. Elbert, kwaye yindawo enhle yokufunda incwadi kwaye uphuze ikofu yakho yasekuseni.
Ubusika bubonelela ngamathuba afanayo okuzonwabisa angaphandle kunye ne-snowshoeing enkulu kunye neendlela zokuhamba ze-ski, kunye namathuba okuloba emkhenkceni. I-Independence Pass ivaliwe ebusika, ngoko akukho kufikelela ebusika kwi-Aspen, kodwa amathuba e-skiing abuyele emva, kwaye i-Ski Cooper (i-30min drive) kunye ne-Copper Mountain (i-45min drive) ziintaba ezikufutshane ze-ski. Ubusika ikwalixesha elilungileyo lokuzipholela emlilweni kwaye wonwabe ukuba wedwa.
***Indlwana ikwilali esezintabeni, ekungenwa kuyo ngeendlela zomhlaba, ezithe saa kwezinye iindawo. Isithuthi se-4WD siyafuneka ukuze ufikelele kwikhabhinethi ngexesha leenyanga zasebusika, kwaye isithuthi esiphezulu sikhuthazwa, kodwa asifunwa, ehlotyeni.***
Ikhabhinethi inayo yonke into oyifunayo ukuze ubaleke intaba ekhululekileyo kunye nemibono emangalisayo kunye nokufikelela kwangoko kwi-adventure yangaphandle. Kukubaleka okuyinyaniso kunye nendawo yokuqhawula, ngoko ke asinikezeli ukufikelela kwi-WiFi. Nangona kunjalo, kukho inkonzo yeselfowuni endlwini, kwaye sinomdlalo weTV/DVD kunye nokhetho lweemovie esinokonwaba.
Amagumbi amabini okulala kumgangatho ophambili lilinye libonelela ngebhedi ekhululekileyo kakumkanikazi. Igumbi lokulala elikhulu linegumbi lokuhlambela labucala, elincanyathiselweyo, kwaye igumbi lesibini lingaphaya kweholo ukusuka kwigumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo. Igumbi lokulala lesithathu likumgangatho osezantsi, ngaphandle nje kwegaraji encanyathiselweyo / isiseko, kwaye inebhedi ephindwe kabini kunye nebhedi engamawele. Kananjalo inegumbi layo lokuhlambela labucala. Igumbi lokuhlala livulekile kwaye licocekile linendawo yokuhlala eyaneleyo, ethambileyo kunye neziko elincinci lobusuku obubandayo basebusika. Ikhitshi ligcwele zonke izinto ezibalulekileyo zokupheka oza kuzifuna, kunye nezinye izithako ezisisiseko, iziqholo, i-oyile kunye ne-condiments. Eyona gem yokwenyani yendlu yidesika ephakamileyo ejonge ngaphandle kweembono ezingenakuthelekiswa nanto zeTwin Lakes - uninzi lweendwendwe zizifumana zichitha uninzi lwexesha lazo phaya zijonge echibini okanye zijonge inkwenkwezi.
Ekugqibeleni, siyenze yayindawo ekhululekileyo yokuba abantu babuyele emva kokuchitha ixesha elininzi lokuzihlaziya entlango kangangoko banako.
Sijonge ukukubamba kwi-adventure yakho elandelayo yaseColorado!
4.93 · Izimvo eziyi-91
Ikhabhinethi ibekwe kwindawo yasemaphandleni esezintabeni malunga neemitha ezili-9,000 ukuphakama. I-Twin Lakes ikwindawo esemngciphekweni omkhulu womlilo, ngoko ke akukho mlilo wangaphandle uvumelekileyo kuluntu. Nangona uya kubona amanye amakhaya ngaphakathi kwendawo, kuzolile yaye kuzolile, yaye siyasibona isabelo sethu esifanelekileyo sezilwanyana zasendle, ngoko iindwendwe azifanele zishiye nantoni na ngaphandle enokutsala abahlalutyi beentaba. Iindlela zigcinwa unyaka wonke, nangona ziziindlela zomhlaba kwaye ziyakwazi ukubona ukuguga nokukrazula ukuba i-grader ayidlulanga mva nje. Kukho iindawo ezimqengqelezi ezimbalwa zendlela eya kwikhabhathi, kodwa akukho minqantsa yehlayo kwabo basenokuba noloyiko lokuhamba kwiindlela zasentabeni.
Ndiya kufumaneka ngefowuni kunye ne-imeyile ngexesha lokuhlala kwakho ukuba imibuzo iyavela.